MUUQAAL: Faysal Cali Waraabe oo is badalay, Colaada Ceel-Afwayn iyo Arimo uu ku eedeeyay Muuse Biixi | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Faysal Cali Waraabe oo is badalay, Colaada Ceel-Afwayn iyo Arimo uu ku eedeeyay Muuse Biixi
Jul 9, 2019 - 20 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Gudoomiyaha Xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe ayaa eedaymo kala duwan u jeediyey Muuse Biixi, Wuxuuna si gaar ah ugu eedeeyay Arinta Doorashooyinka oo Mudooyinkii dambe uu muran ka taagnaa.
Sidoo kale Faysal Waraabe oo ka hadlayey Colaada Ceel Afwayn oo dad badan ay ku Nafwaayeen ayaa si lamid ah Xukuumadda Kulmiye ku eedeeyay, Wuxuu sidoo kale baaq u diray dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi. “Masiibada ka dhacday Ceel-Afwayn waxaan leenahay dadka ku Ordaya Naarta, Naarta ka jooga”.
Waa faaruqoo waa film Kartoon: Colaada dadka Muslimiinta ah ee ku dagaalamaya Ceel afweyn ilaahah hakala qaboojiyo waana in loo gurmadaa:
Laakiin kan Mental ka ahi sow kii shalay ku baaqayey in Daarood la laayo taasoo dhamaan reer shixisaaq aanu qof keliyihi ku oran waad khaldan tahay Faisal Faaruqoow: qaacidadii fiqiga ahaydna waxay ahayd ((hadaad shay Ka aamusto waxay Tusaysaa in aad tali Ka tahay)):
Shacabka snm oo codsaday in Madaxweynaha Gobolka Ogaden mustafe Cagjar dhameeyo Colaada sidii Sool ka dhacday. Lkn suaashu waxaa weeye Wasiir Cawad ma ogolyahay in dalka nabadiisa looga Raadiyo dal kale ? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Anigu waxaan odhan lahaa wafti irirsamaale ah Wasiir Fasax ka haysta muqdisho ha laga soo diro . Lolz 🇸🇴🇸🇴🇸🇴
30kii sano ee ina dhaafay dadka waxaa la barayay qabyaalad.
Lama barin qadiyad Diimeed iyo dad nimo midna.
Maamul looma dhisine waxaa la caayay Siyaad Barre Allaha u naxariistee.
Dee waa kuwaa is-qalanaya sidii Yeyda.
Kitaab ayay ku dhaartaan,maalinta dambe way jabiyaan dhaar.
Dadku waxay noqdaan waxa lagu hogaamiyo.
Dawlad kala celisa oo dadkan maamusha ayaa loo baahn yahay,looma baah mid magaca dawladnimo iska sheegta oo Mooryaan ah.
Iska sii biqleeya.
Wasiir Cawad fasax ka haysta .
Dee waa in Wasiir Cawad ruqsad looga soo qaadaa,hadii kale balaayo ayaa dhici/
Papua Mew Guinea ayaa yaabtay.
Dee idoorka waxay aheyd intay Jaadka iyo qabyaalada baranayeen in ay iska xaasiriyaan Jaamacada Camuud . Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waxaan arkayey kuwo leh Garxajis Galbeed dalka waa kula jira Habaryoonis iyo sacad yoonis kkkkkkkkkkkkkk anigu kala garanmaayo Garxejis iyo habaraha kale Lkn waxaan leeyahay idin kala Garanmeynee Guuleeysta kkkkkkkkkkkkkk
Waxaan maqlay in marka la dhaarto ay Habar jeclodu dhaarta jabiso.
Waa dad wareersan oo qabyaaladii raaxada ka qaaday.
Beentana waabay dhameeyeen.
Dee iyaga ayaa raba in sidaa u noolaadaan.Dookha iyaga ayaa iskale.
Liqi & Bahal
Maxaa isku biiri-seen!
Dadkaaas walaalaha ah Alla hakala qaboojiyo.
Dagaalka ceelafweyn kama duwanu dagaalada ka dhexdhoco somalida weliba dadka isla degan. Waxaadse modaa in la siyaasadeynaayo oo laga DHEX raadinaayo wax aan meesha aalin.
Dadka reer Somaliland waa in ay ku dadalaan nabadda iyo nimcada ilaahey siiyay.
Dagaal wiil kuma dhasho.
Laalays kkkkkk waad igaqos lisay maxaad isku biriseen kulahaa kkk waxay isleyihiin isaaq baa isdili markasaad xornimo qaadan
Dhalfo Idoor Liqe & Bahal
Somaliland 1988 dagaalka dawladii Faqashta mucjiso ayay ku noqotay aduunka sida Xaq u Dirirka Somaliland guusha ugu soo hoyaya tay!kkk
Somaliland 1988 ilaa 3 dex jiil oo RAG baa u soo koray!
Hubkii ay 1988 faqashta ka furteen mid ka badan bay haystaan. Dhulkoodii bay dhamaan maamulaan.
Maxay ka qaadi kartaan Somaliland????
dagalka hala jojiyo way na dhibaysa dhig baxa ka
Socda cel afwayn dhibka waxaa weeye xukunkii
Waxaa haya askeri war hala doono ISIMO somaliyed
Ama arinka labada belod haloo gacan geliyo
Mustafa cagjar isaga horay usoo afjaray dagalkii
Belaha ee sool
Stop this stupid wars, every war is bad idea specielly civilwar, war between one family.. I call family tragedy..
Allow kala qabooji.
Somalidu dagaal la isku gubto kama gaboobaan.
Dad baa miskaakiintaan dab ka dhex shidaya oo ayagu power ku doonan…. Goorma ayaa warmongers la baran?
War geeliina raacda daanyeer yahay, wiil dhintay mooyee maxay faaiideen, ma tuulooyin iyo dukaamo ayey kala dhaceen..
Bal ii sheega guusha dagaalkaan laga gaarayo oo ahayn imasa ayaan reer hebel ka dilnay… mayd kala tirsato….yaab!
Alla ha kala qaboojiyo dadkaas walaalaha ee bilaa micnaha dhiigooda u daadinaya…
War dabka biyo ku shuba….war dabka damiya intaanu faafin….anigu horaa u ogaa colaada soomaalida midda dadka sheegta inay isxigaan ayaa dhib badan..
Waxaan ku talin lahaa inaan Isaaq lagu eegan xallinta colaadan ee Somaalida kale gurmataa si colaadaas loo soo afjaro….alloow naga qabooji….
Wasiir wacad haduu ogolaado odoyaal irirsamaale ah in ay Tagaan Burco iyo hargiesa , waxaa kow ka ah Dabshid . Lkn waa inuu marka hore Garoowe sii maro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hadii Wasiir Cawad amarkiisa la qaadan waayo oo odoyaasha irirsamaale dhuumasho ku tagaan snm , dee wixii Gini ku dhacay wax ka badan baa odoyaasha soo Gaadhaya kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Snm mar danbe wadan kale booqan maayaan. Wasiir Cawad wuxuu sheegay diyaaradii qaada madax snm ah in lagala laaban doono licence ka ay ku isticmaalaan airspace ka Somaliya kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk